Beesha (Muumin Aadan) Maxay U Diliwaayeen Agoon (C/weli)? – Codka Qaranka Tanadland
Beesha (Muumin Aadan) Maxay U Diliwaayeen Agoon (C/weli)?
Sawir kaan markii laga qaaday (C/weli) oo ah nin agoonimo ku koray oo aan aabihiis arag. Kadib markii beesha (Muumin Aadan) sanadkii 1954 ka dagaalkii "Car-istaag" intay rag uu ku jiro nolol ku qabatay ay gawraceen. Waxaa hubaal ah markii sawirka laga qaaday isaga oo la fadhiya ninkii la rabey in xumeynta tolkiis loo adeegsado in uu ka naxay, waxaana ka qaaday (Maxamuud C/qaadir "Shoole") wiil la socdey.
Sidaad la socotaan beesha Habar-majeerteen gobalka mudug waxaa uga socdey xasuuq joogto ah mudo 20 sanaddood ah. Waxaana xasuuqaas ku hayey beelaha reer (Cismaan Yuusuf) ka dega Gobalka Mudug.
Hadaba markii beesha Habar-majeerteen iyo hartigii ay soo kaxaysatay dagaalkii labada maalmood looga adkaaday. Waxaa dhacday in xasuuqii joogtada ahaa ay halkii ka sii wadaeen beelaha (Cismaan Yuusuf). Tusaale ahaan raga beesha (Cismaan Yuusuf) ay gobalka Mudug uga laayeen Habar-majeerteen, waa’ay ka badanyihiin intii ay ka laayeen dagaalkii labada maalmood ka hor. Dagaal kaas oo dhacay (01/09/2011) iyo (02/09/2011). Intii ka danbeysey dagaalkii labada maalmood, ficiltanka keliya ee ay samaysay Habar-majeerteen wuxuu ahaa inay iskudaydo inay isku dirto beesha reer (Fiqi-ismaaciil) iyo beelaha kale ee (Cismaan Yuusuf).
Beesha Habar-majeerteen waxay beesha (Fiqi-ismaaciil) ay ka raadiyeen nin doqon ah oo lagu adeegankaro, loona adeegsado in uu tolkiis iska hor keeno oo uu kala qaybiyo. Sanadkii 2014 ka ayey beesha Habar-majeerteen waxay heleen nin la yiraahdo (Maxamuud Sheekh C/qaadir “Shoole”). Nin kaas oo ka soo jeeda beesha (Fiqi-Ismaaciil). Beesha Habar-majeerteen waxay qarash ku bixiyeen sidii nin kaasi uu ugaas ugu noqonlahaa besha (Fiqi-Ismaaciil). Arintaas oo ay ku guuleysteen inay fuliyaan isla sanadkii 2014 -ka. Nasiib wanaag walow beesha Habar-majeerteen uu uga baxay fulinta hawshaas qarash farabadan. Hadana beesha (Fiqi-ismaaciil) shirqoolkaas cadowga reer Tanadland uu soo maleegey si sahlan ayey u fashiliyeen. Waxayna ugaaska guud iyo isimada kale ee reer Tanadland ay uga digeen shirqoolka cadowga iyo nin kaas cadowga u adeegaya inay ka digtoonaadaan.
Markaas ka dib isimka guud ee beelaha reer Tanadland (Ugaas Maxamuud Ugaas Axmed Ugaas Maxamed) wuxuu kula taliyey beesha (Fiqi-ismaaciil) inay caleemosaartaan isim u gaar ah. Dabeed beesha (Fiqi-ismaaciil) waxay si deg-deg ah ay isim ugu dooratay magaalada Daarasalaam (Suldaan Maxamuud Xaaji Ibraahim “Cagmadhige”). Suldaan “Cagmadhige” ayaa beelweynta reer (Fiqi-ismaaciil) waxay suldaan u doorteen markii ay fashiliyeen shirqoolkii ay beesha Habar-majeerteen ku guuldaraysatay. Isla sanadkii 2014 ka dhawr bilood ka dib markii uu (Maxamuud Sheekh C/qaadir “Shoole”) oo u adeegayey cadowga tolkiis uu caano isku shubay.
Suldaan “Cagmadhige” ayaa mudo dheer wuxuu ka mid ahaa tujaarta waaweyn oo xarumo ganacsi ku leh magaalada Dubai. Waana ninka riiga geliyey magaalada Daarasalaam. Magaalada Daarasalaam oo magaalo qadiim ah oo waagii hore la’oranjirey (Abaarey), ayaa noqotay magaalo barwaaqo ah oo beero badan iyo biyo badan leh. Markii uu ganacsade (Maxamuud “Cagmadhige”) intuu riiga galiyey uu magicii hore ka bedelay. Isaga oo u bixiyey magaca magaalada hada loo yaqaan ee (Daarasalaam). Magaaladii waagii hore la oranjirey (Abaarey) oo ahaanjirtey tuulo aad u yar oo berkado ay ku yaalaan. Ayaa hada ah magaalo weyn oo leh hoteelo, shidaaleyaal, dugsi sare iyo mid h/dh isugu jira. Horumar kaasna waxaa u sabab ah suldaanka beelweynta (Idiris Ugaas Cismaan) Suldaan Maxamuud Xaaji Ibraahim “Cagmadhige”.
Shirqool kaas beesha Habar-majeerteen waa’ay ku qasaartay, beelaha (Aadan Cismaan) iyo (Idiris Cismaan) na midnimadoodii xasuuqii ay cadowga ku hayeen ayaa xoogeystey. Xasuuqa joogtada ah ee lagu hayo beesha Habar-majeertee ayaa hada wuxuu marahayaa, heer beesha Habar-majeerteen ay ku jirto marxaladdii ugu xumayd. Beri waxaa jiri-jirtey ay magaalada Gaalkacyo ay ka hawlgalaan 2 idaacadood iyo TV ay leeyihiin, iyo weliba wakiilada 2 tv oo ay beesha Dhulbahante leedahay. Oo iyadoo beesha Habar-majeerteen uu xasuuq badani ku socdo ay waqooyiga xaafadda Israac ay ka booteeyaan. Iyaga oo adeegsanaya warbaahinta beesha Harti oo xabadda isku jaho u rida. Marka hada ah magaalada Gaalkacyo beesha Habar-majeerteen idaacadda Daljir oo keliya ayaa wakiil u joogaa, iyaduna kama ay hadasho marka beesha Habar-majeerteen dad laga laayo. Bal iska daah hawlo borobogaando ah inay tolkood u fuliyaan’e. Warbaahintii beesha Habar-majeerteen ay waayadii hore adeegsanjirtey Gaalkacyo waa’ay ka carareen marki beesha (Muumin Adan) ay weriyeyaal badan ka laysay. Idaacaddii Radiyo Gaalkacyo la oranjireyna gebigeediiba waa ay bur-buriyeen. Oo meeshii dhismaha idaacadda Radiyo Gaalkaco ay ku oolijirtey hada waa meel banaan.
Iyadoo ay saas tahay ayaa tan iyo intii ka danbeysey dagaalkii labada maalmood ee 6 sanadood ka hor dhacay, waxaa adkaatay laynta maleeshiyada ka hawl gala laanta waqooyiga xaafadda Israac. Oo aad u xadidey dhaq-dhaqaaq qooda. Kana go’ay inay guriga ay deganyihiin iyo xerada mooyee inay meel kale aadaan. Jidka ay marayaana had iyo jeer bedela si aan loo bartilmaameedsan. Waxay kaloo ay aad uga taxadaraan tegida meelaha dadkooda lagu laayo. Ayaan dhaweyd intii uu joogey waqooyiga xaafadda Israac horjoogaha beesha Habar-majeerteen iyo intii uusan imaanba, waxaa beesha (Muumin Aadan) ay magaalada Gaalkaco ku laysay rag tobaneeyo ah oo Habar-majeerteen ah. Xaqiiqada jirtaana waxa weeye, xasuuqa 20 jirsadey ee joogtada ah Habar-majeerteen inay magaalada ka qaxdo mooyaane wax ay ka qabankarto ma’ay jirto. Maleeshiyada booliska ah ee habar-majeerteen na maadaama iyaga iyo shacabka beeshoodaba isku si loo ugaarsanayo, waa niman dhuumanaya oo si kasta oo loo laayo aan dadkooda waxba u qabankarin.
Balse arinta layaabka leh oo shacabka beesha (Muumin Aadan) ay aadka uga caraysanyihiin ayaa waxay tahay, waxa loo qaarajin waayey ilaa iyo hada agoon (C/weli). Arintaanina waa arin fadeexad ah oo ay beeshu isku dhaliisho. Baraha bulshada beesha (Muumin Aadan) ay ku kulmaan waxaa had iyo gooraale la soo geliyaa sawirka agoon (C/weli) iyo (Maxamuud Sheekh C/qaadir “Shoole”) oo isla fadhiya. Dadka badankooduna waxay ku taliyaan agoon (C/weli) in si ka xun sidii aabihiis loodiley loo dilo. Waxaana qiyaasayaa in uu sawirkaani aad u faa’fay oo u dadka badankooda taleefanada ugu jiro.